नेवाडा WIC | जेपीएमए, इंक
यदि तपाईं वा कुनै व्यक्तिलाई थाहा छ वा WIC सेवाहरूबाट सम्भवतः काम गर्न सक्नुहुनेछ, कृपया तपाईको नजिकैको क्लिनिकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा नेभाडा WIC Hotline लाई सम्पर्क गर्नुहोस्। 1-800-8-NEV-WIC (1-800-863-8942)
तपाईंको eWIC कार्ड प्रयोग गर्दै
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो WIC खाद्य वस्तुलाई हालको सपिङ्ग लिस्ट वा तपाईंको अन्तिम रसिद प्रयोग गरी सन्तुलन जान्नुहुन्छ।
तपाईंको WIC वस्तुहरूको लागि पसल, त्यसपछि चेकआउट लेनमा जानुहोस्। ल्यानमा "WIC स्वीकृत यहाँ" भन्ने संकेतको लागि हेर्नुहोस् वा तपाईं स्टोरमा एक हुनुहुन्छ भने "कुनै पनि लेनमा WIC" को रूपमा संकेत गरिएको तपाईं "कुनै पनि लेनमा जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।"
तपाईंको अन्य क्रेनरीजबाट आफ्नो WIC-योग्य वस्तुहरू अलग गर्नुहोस्।
तपाईंको नेविडा WIC EBT कार्ड प्रयोग गरी कैशियरलाई भन्नुहोस् र तपाईलाई हुन सक्छ कुनै पनि स्टोर वा निर्माता कूपन दिनुहोस्।
पोइन्ट को-बिक्री (POS) टर्मिनलमा "WIC खरीद" चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंको नेवाडा WIC EBT कार्ड स्वाइप गर्नुहोस्।
तपाईंको चार अंकको पिन प्रविष्ट गर्नुहोस् र "इन्टर" थिच्नुहोस्।
कैशियरले प्रत्येक वस्तुलाई स्क्यान गर्नेछ भन्ने पुष्टि गर्न यो यो स्वीकृत WIC खाद्य वस्तु हो।
कैशियर तपाईंको कूपन को राशि, कुल सबै WIC खाद्य वस्तुहरु लाई प्रविष्ट गर्नेछ र तपाईंलाई एक WIC EBT रसिद दिनेछ। तपाईंको रसिदले तपाईंको बाँकीको ब्यालेन्स देखाउँछ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको नेभिडा WIC EBT कार्ड र राप्ती छोड्दा रसिद छ।
खाद्य सूची / Lista de alimentos
नेभाडा WIC खाद्य सूची हेर्नका लागि तलको विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
नियुक्ति - के आवश्यक छ?
तपाईंको नियुक्तिको समयमा, हरेक आवेदकलाई उनीहरूको आवश्यकता पर्नेछ
Residency को प्रमाण, र
तपाईको WIC प्रमाणिकरण नियुक्तिको लागि निम्न मध्ये कुनै पनि ल्याउन तपाईंलाई सोध्नेछ
(तर सीमित छैन):
अवस्थित / वैध मूल कागजात हुनुपर्दछ (फोटोकपी छैन)
बच्चाहरु / बच्चाहरु
अस्पताल जन्मिएको रेकर्ड
महिला वा वयस्क (अभिभावक, अभिभावक वा प्रोक्सी)
फोटो आईडी (जस्तै चालक लाइसेन्स, पासपोर्ट)
कार्य वा स्कूल आईडी
RESIDENCY को सुरक्षा
निवासको एक प्रमाण सम्पूर्ण परिवार प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। आमाबाबु / अभिभावकको निवासको शिशु शिशु / बच्चामा लागू हुन्छ (नाम प्रयोग भएको कागजातमा देखा पर्दैन)।
निम्न अवतरण कागजातहरू अवशिष्टताको फारमहरू हुन्:
निवासको लागि हालको उपयोगिता बिल रिपोर्ट गरियो
आवास / आवासको लागि किराया वा बंधक प्राप्तिहरू
मकान मालिक बाट स्टेटस
हालको भौतिक ठेगानाको साथ नेभाडा चालक लाइसेन्स वा राज्य आईडीको स्थिति
एक PO बक्स ठेगाना निवासको प्रमाणको लागि स्वीकार्य छैन
घरको सदस्य द्वारा प्राप्त सबै आयका लागि कागजात ल्याउनुहोस्
आय आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर, बीमा प्रीमियम, बाल समर्थन, कार भुक्तानी, आदि को लागी कटौती गर्नु अघि सबै सकल आयको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। पूर्व 30 दिनबाट सबै आय सामान्यतया विचार गरिनेछ, सहित:
मजदूरी, वेतन, कमिशन, वा शुल्क
खेती र गैर खेती स्व रोजगार बाट शुद्ध आय
सामाजिक सुरक्षा फाइदाहरू
बचत वा बार्षिकमा लाभांश वा ब्याज
सम्पत्ति वा ट्रस्टहरूको आय, लगानीमा वा शुद्ध भाडा आय
सार्वजनिक सहायता वा कल्याण भुक्तानीहरू
सरकार, नागरिक कर्मचारी वा सैन्य सेवानिवृत्ति वा पेंशन वा दिग्गज भुक्तानीहरू
निजी पेंशन वा वार्षिकता वा बीमा फाइदा
अनुशासन वा बाल समर्थन भुक्तान
परिवारमा बस्ने व्यक्तिहरूको नियमित योगदान
अन्य आयमा समावेश छ, तर सीमित छैन, प्राप्त रकम, बचत, लगानी, विश्वास खाताहरू र अन्य स्रोतहरू सहित कुनै पनि स्रोतबाट प्राप्त रकम वा फिर्ता लिईएको परिवारसँग सजिलै उपलब्ध छन्।
म WIC EBT कार्डमा मेरो WIC खाद्य लाभ कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
तपाईंको नेवाडा WIC EBT कार्डले तपाईंको सम्पूर्ण परिवारको लागि सबै फाइदाहरू लिनेछ। WIC क्लिनिकमा, तपाइँ हालको महिना र दुई भविष्यको महिनाको लागि तपाईंको परिवारको WIC फूड लाभहरूको सूची पाउनुहुनेछ।
तपाईंको WIC क्लिनिक आफ्नो खाना प्रस्तुत गर्न र प्रणालीमा आफ्नो फाइदाहरू प्रविष्ट गर्न जिम्मेवार छ। तपाईंसँग एक नेवाडा WIC EBT कार्ड हुनेछ जुन तपाईंको सम्पूर्ण परिवारको लागि सबै फाइदाहरू छन्। तपाईंले आफ्नो क्लिनिकबाट एक किनमेल सूची प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाइँले तपाईंको कार्डमा उपलब्ध सबै लाभहरू देखाउनुहुन्छ।
म कसरी मेरो WIC खाद्य लाभ सन्तुलन (किनमेल सूची) थाहा पाउनेछु?
तपाईंको ब्यालेन्स प्राप्त गर्न चार तरिकाहरू छन्:
WICShopper मोबाइल अनुप्रयोग
सधैँ तपाईंको अन्तिम रसीद राख्नुहोस् किनभने यो तपाईंको शेष ब्यालेन्स देखाउनेछ।
टोल फ्री नम्बरलाई कल गर्नुहोस् 1-877-234-7056 र निर्देशनहरू पछ्याउनुहोस्।
तपाईंको किराना स्टोरमा क्यासियर लाइनमा जानुहोस् र सन्तुलन जाँच गर्नुहोस्।
यदि मेरो WIC खाद्य लाभहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने के हुन्छ?
तपाईंले आफ्नो खाद्य लाभहरूमा सम्भावित परिवर्तनहरूको बारेमा छलफल गर्न तपाईंको WIC क्लिनिक कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न आवश्यक छ।
तपाईंले आफ्नो WIC क्लिनिक कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ। सँधै निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ठेगाना सही छ किनकि तपाईंले कसरी प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईको प्रतिस्थापन कार्ड तपाईको कार्ड हराएको वा चोरी गर्नु पर्छ।
तपाईंको पिन चार-अंकको गोप्य कोड हो जुन तपाईंलाई किराने पसलमा तपाईंको नेवाडा WIC EBT कार्ड प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको कार्ड तपाईले आफ्नो PIN चयन नगरेसम्म काम गर्नुहुन्न। तपाईंको पहिलो नेवाडा WIC EBT कार्ड जब तपाइँ आफ्नो पिन चयन गर्नुहुनेछ। तपाइँलाई सम्झनका लागि सजिलो चारवटा छनौट छान्नुहोस्, तर कसैको लागि कडा मेहनत गर्नु।
कुनै पनि आफ्नो पिनलाई कहिल्यै भन्नुहोस्! तपाईंको नेभाडा WIC EBT कार्डमा तपाईंको PIN लेख्नुहोस्। यदि कसैले तपाईंको पिन जान्दछ भने, उनीहरूले तपाईंको फाईदा प्राप्त गर्न तपाईंको कार्ड प्रयोग गर्न सक्दछन् र ती फाइदाहरू प्रतिस्थापन गर्दैनन्।
के भयो भने म मेरो पिन बिर्सन्छु, नयाँ पिन चाहन्छु वा कसैलाई मेरो पिन थाहा छ?
ग्राहक सेवामा कल गर्नुहोस् 1-844-892-2932 नयाँ पिन रोज्न।
यदि तपाईं आफ्नो पिन सम्झन सक्नुहुन्न भने, ग्राहक सेवामा कल गर्नुहोस् 1-877-234-7056 नयाँ पिन रोज्न। यदि तपाई गलत पिन प्रविष्ट गर्नुहुन्छ भने, तपाईसँग सही नम्बर प्रविष्ट गर्न तीन थप सम्भावना हुनेछ। चौथो प्रयास पछि, तपाईं आफ्नो कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जबसम्म 12: अर्को दिन 01 हुँ।
यदि तपाईंको कार्ड गुमाएको वा चोरी भएको छ भने, ग्राहकलाई फोन गरेर तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नुहोस्। सँधै मिनेटमा तपाईंको खोजी कार्ड हराइरहेको छ सधैँ कल गर्नुहोस्। तपाईंले मेलमा तपाईंको प्रतिस्थापन कार्ड प्राप्त गर्न 5-7 व्यापारिक दिनहरू पर्खनुपर्छ।
म कसरी आफ्नो WIC EBT कार्डको ख्याल राख्नुहुन्छ?
तपाईको कुनै पनि व्यक्तिगत पहिचान नम्बर (PIN) लाई भन्नुहोस्।
तपाईंको कार्डको पछाडि आफ्नो नाम साइन गर्नुहोस्।
तपाईंको कार्डलाई स्वच्छ स्थानहरू सुरक्षित, सुरक्षित र टाढा राख्नुहोस् जस्तै सीधा सूरज लाइट जस्तै र मोडा नगर्नुहोस्।
तपाईंको कार्डलाई इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू जस्तै TV को, रेडियो, वीसीआरको, माइकभ्रोभ्स, आदिबाट टाढा राख्नुहोस् र म्यागेट्स र अन्य म्याग-स्ट्रिप कार्डहरू (जस्तै, क्रेडिट वा डेबिट कार्डहरू) बाट टाढा राख्नुहोस्।
के हो यदि मलाई मेरो WIC किनमेल गर्न को लागी कसैले अरुलाई चाहिन्छ?
यदि तपाइँ अरूलाई तपाईंको लागि पसल गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंको WIC क्लिनिक स्टाफसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र प्रोक्सी थप्नको लागि तिनीहरूलाई सोध्नुहोस्।
के भन्नुहुन्छ कि स्टोरको WIC EBT उपकरण काम गरिरहेको छैन भने?
तपाईं त्यस भण्डार स्थान पछि एक पटकमा फर्कन सक्नुहुन्छ वा तपाईं पसल गर्न विभिन्न WIC-स्वीकृत भण्डारमा जान सक्नुहुन्छ।
के यदि मेरो WIC खाद्य वस्तुहरूमध्ये कुनै स्क्यान छैन वा यदि मैले "अपर्याप्त ब्यालेन्स?" भने।
यदि पसलको WIC EBT प्रणालीले तपाईंको WIC खरीदको लागि WIC-स्वीकृत खाद्य वस्तुलाई अनुमति दिँदैन भने वस्तुलाई त्यो भण्डारको लागि हालको WIC-अनुमोदित खाद्य वस्तुहरूको सूचीमा समावेश गर्न सकिदैन।
यदि कैशियरले तपाईंको WIC खाद्य वस्तुहरूको लागि "अपर्याप्त शेष रकम" भन्छ भने, तपाईंको उपलब्ध ब्यालेन्स समीक्षा गर्नुहोस्। तपाइँ आफ्नो उपलब्ध शेष रकम पहिचान गर्न भन्दा बढी खाद्य वस्तुहरू खरीद गर्न तपाईंको नेवाडा WIC EBT कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
मेरो कार्डबाट फाइदा उठाइयो भने मैले के गर्छु र मैले भण्डारबाट खाद्य वस्तुहरू प्राप्त गरेन?
यदि तपाईले सोच्नुभएको छ कि स्टोरले एउटा त्रुटि बनाएको छ भने तपाईले ग्राहक सेवालाई चाँडै नै गल्तिको बारेमा जानकारी गराउनुपर्दछ। न त स्टोर र न त WIC क्लिनिकहरू वस्तुहरू तपाईंको नेवाडा WIC EBT कार्डमा फर्कन सक्षम छन्। तपाईंले दावी दावी गर्न ग्राहक सेवालाई कल गर्नु पर्छ।
मैले ग्राहक सेवा कहिले कताँ?
यदि तपाईंको कार्ड क्षतिग्रस्त छ वा काम गर्दैन।
यदि तपाइँ आफ्नो पिन सम्झन सक्नुहुन्न वा तपाइँको PIN परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने।
यदि तपाइँसँग प्रश्नहरू छन् वा तपाईंको कार्डमा मद्दत चाहिन्छ।
तपाईंको खाद्य लाभको रकमको लागि।
एक दावी फाइल गर्न